Mijanona eo amin'ny làlambe ny fizahantany Puerto Rico na dia teo aza ny fihetsiketsehana sy ny fialan'ny Governora
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mijanona eo amin'ny làlambe ny fizahantany Puerto Rico na dia teo aza ny fihetsiketsehana sy ny fialan'ny Governora
ankehitriny, Jereo i Puerto Rico, ny fikambanana mpivarotra toerana (DMO) nosy, nahatratra ny manaraka fametraham-pialan'ny governora mba hanomezana vaovao farany momba ny fizahantany ao amin'ny nosy amerikanina.
Tamin'ny hetsi-panoherana vao haingana tao amin'ilay nosy izay nitaky ny fialàn'ny Governora dia nilaina ny famahana vahaolana mba hanohizan'ny nosy ny lalan-kaleha mankany amin'ny fanarenana. Puerto Rico dia mbola mijanona eo amin'ny làlam-pandrosoana hahazoana taom-pilalaovana fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany amin'ny taona 2019. Ampirisihinay ny kaontin'ny mpandeha maro tonga teto amin'ny nosy nandritra ny tapa-bolana mba hankafy ny asan'ny gastronomia, ny zavatra manintona ary ny fanomezana kolontsaina ao amin'ny nosy, ary izahay mandray mpitsangatsangana vaovao isan'andro.
Misokatra hatrany i Puerto Rico amin'ny fizahan-tany ary ny fanovana ny fitarihan'ny governemanta ao amin'ny nosy dia tsy manova izany. Ny Discover Puerto Rico dia fikambanana tsy mitady tombontsoa, ​​tsy miankina amin'ny fanjakana noforonina mba hiantohana ny fitohizana sy hampitomboana ny fizahan-tany amin'ny nosy amin'ny alàlan'ny lalàna roa-manisa satria ny indostria dia mandray anjara lehibe amin'ny fanamafisana ny toekarena sy ny famoronana asa. Mbola hitohy ny iraka ataon'ny DMO na eo aza ny fiovana ara-politika.
Ny Discover Puerto Rico dia manohy miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany mba hitazomana ireo mpandeha hatrany ny vaovao farany ilain'izy ireo hananana fotoana mahafinaritra sy azo antoka mandritra ny Puerto Rico. Ny mpitsidika dia tokony handray fitandremana amin'ny fiarovana ankapobeny toy ny any amin'ny toeran-dehibe metropolitan any Etazonia. Amin'ny maha faritany amerikana azy dia iharan'ny lalàna sy lalàna federaly mihatra rehetra i Puerto Rico.
Serivisy, orinasa, ary manintona
Mandray mpitsidika maherin'ny 4 tapitrisa isan-taona i Puerto Rico izay manana fotodrafitrasa fizahan-tany mandroso be. Ny sidina, seranan-tsambo, hotely, seranam-piaramanidina, trano fisakafoanana, fivarotana, manintona ary taxi dia miasa ara-dalàna.
Nisokatra indray ireo orinasa nakatona nandritra ny fihetsiketsehana, saingy noho ny fitokonana fanampiny antenaina anio 15 jolay, ny mpitsangatsangana dia tokony hanadihady amin'ireo orinasa any amin'ny faritra sy mpamatsy fizahan-tany momba ny hetsika ary tokony hanome fotoana fanampiny hanaovana dia.
Ny fizahantany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanamafisana ny toekarena sy ny famoronana asa, ary ny Discover Puerto Rico dia matoky fa hitohy hiroborobo ny fizahan-tany amin'ny volana ho avy ary tsy hisy fiantraikany amin'ireo tranga nandritra ny roa herinandro lasa.
Ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ilay nosy dia misy mpiasa manodidina ny 83,000 izay miasa isan'andro mba hahazoana antoka fa hanana traikefa tsara ny mpitsidika.
Ny filoha Ogandà sy ny mpitondra fizahantany dia mandray ny delegasiona Miss World
Crowne Plaza Hotels & Resorts dia namoaka hotely enina voalohany any Etazonia, Eropa ary Sina